ठूलो सोच र सानो पूँजीबाट गर्न सकिने व्यवसाय ‘पर्यटन’, उद्यमी श्याम थपलियाकाे अनुभव – BikashNews
ठूलो सोच र सानो पूँजीबाट गर्न सकिने व्यवसाय ‘पर्यटन’, उद्यमी श्याम थपलियाकाे अनुभव
२०७५ पुष २९ गते १८:५४ श्याम थपलिया
ओशो वल्र्ड ट्राभल नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्याम थपलिया ट्राभल एण्ड टूर क्षेत्रका पायोनियर पर्सन हुन् । बाल्यकालमा पढेर स्कूलको टिचर बन्ने सोच थियो उनको । घरमा पैसाको अभाव टार्न उनले १७ वर्षको उमेरमा किराना पसल खोले । पछि महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषमा १० वर्ष सरकारी जागिरपनि गरे । सन् १९९५ मा कम्यूनिकेशन साईबर चलाए । २० वर्षअघि साईबर बन्द गरेर ओशो वल्र्ड ट्राभल नेपाल कम्पनी खोले । यो कम्पनी ट्राभल, टुर तथा टिकेटिङमा लिडर कम्पनी हो, जसले उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेबापत हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रबाट अवार्डहरु प्राप्त गर्दै आईरहेको छ ।
पछिल्लो समय उद्यमशीलताको लागि अनुकूल समय बन्दैछ । नयाँ पुस्ताले प्रोफेशनल तरिकाबाट काम गर्न चाहेको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै नेपालमा घुमफिर गर्न, लगानी गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुकूल वातावरण बन्दैछ भन्ने सन्देश विश्वमा गईरहेको छ ।
पर्यटन व्यवसाय अरु व्यवसायसँग अन्तर सम्वन्धित र परिपूरक छ । पर्यटन व्यवसाय विस्तार हुँदा कृषि, उद्योग, सेवा सबै क्षेत्रको व्यवसाय विस्तार हुन्छ । पर्यटक आउँदा साग बिक्छ, आलु बिक्छ, फलफूल बिक्छ । होम स्टेदेखि होटलको आम्दानी हुन्छ । बैंकलाई किस्ता नियमित हुन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम आउँछ । दूरसञ्चार कम्पनीहरुको सेवा बिक्छ । पर्यटन क्षेत्रले व्यवसायिक गतिविधि विस्तारसँगै विश्वलाई नजिक ल्याउँछ । ज्ञान र सिपको स्थान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासतर्फ राम्रा सूचक देखिएका छन् । हरेक वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या वृद्धि भईरहेको छ । सन् २०१८ मा करिव ११ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । ५ वर्षसम्ममा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने घोषणा भएको छ ।
घोषणा मात्र होइन, कार्यस्थलमा सुधारपनि देखिन्छ । दुई वर्षअघि एउटा पाँच तारे होटलले जेनेरेटर चलाउन मासिक २० लाख रुपैयाँ डिजेल खरिदमा खर्च गर्नु पथ्र्यो । आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । २० लाखको सट्टा २ लाख बिजुलीमा खर्च होला । मासिक १८ लाख बचत भएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि धेरै काम भएका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य दु्रत गतिमा हुँदैछ । पहिला एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल थियो भने अब दुई वटा हुँदैछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिस्तार हुँदैछ । यसले हवाई सेवा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सञ्जाल बिस्तारमा सहयोग नै गर्छ । होटलहरुमा नयाँ लगानी थपिएका छन् । स्तरीय होटलमा एक हजार भन्दा बढी कोठा थपिंदैछन् । सञ्चार सुविधा राम्रो भईरहेको छ । पर्यटकीय गन्तव्य नजिकसम्म स्वस्थ्य सेवा बिस्तार हुन जरुरी छ ।
पर्यटन सेवाको क्षेत्रमा जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्छ । भाषामा निखारता आवश्यक छ । सभ्य र मिठास भाषाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । हस्पिटालीटिमा सीप र दक्षताको विकास जरुरी देखिन्छ ।
नयाँ मान्छे पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पूर्व विषयबस्तुको ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ । नेपालमा कति पर्यटक आउँछन्, कति होटल छन्, कति ट्राभल एजेन्सी छन्, कति ट्रेकिङ कम्पनी छन् ? कुन क्षेत्रको सेवास्तर कस्तो छ ? अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसपछि कुन सेवा दिन तयार हुने हो ? त्यसमा नयाँपन के दिने हो ? स्पष्ट सोच हुनुपर्छ । अरुको कपी गर्ने र अरुको व्यवसाय खोस्ने सोच बनाएर यस क्षेत्रमा आउनेहरु पछि अलमलमा पर्छन्, संकटमा पनि पर्छन् ।
एउटा ट्राभल कम्पनी खोल्ने हो भने त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन् ? अफिस कहाँ राख्ने, कस्तो पूर्वाधार बनाउने, यातायातको प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? पर्यटकीय गन्तव्यहरुको छनौट कसरी गर्ने, त्यसबारे पर्याप्त जानकारी कसरी लिने, जनशक्ति परिचालन कसरी गर्ने, सबै कार्य गर्नको लागि पूँजी कसरी जुटाउने जस्ता विषयमा सोच, योजना र पूँजीको प्रबन्ध हुनु पर्यो । त्यसपछि व्यवस्थापकीय कार्य अरुले भन्दा राम्रो गर्दै जानुपर्यो ।
सानो पूँजी, ठूलो सोच
युरोपमा दाउरा बेचेर धनाढ्य भएका छन् । त्यहाँ ठूला मुढाको व्यापार गर्नेहरु धेरै थिए । ठूलो मुढा बाल्नको लागि साना दाउरा आवश्यक सबैलाई हुन्थ्यो । त्यहि बेला एक जनाले सानासाना दाउरा बनाएर ठूला मुढा बाल्नेलाई बेच्न थाले । उनी पनि यूरोपका ठूला धनाढ्य भए । शुरुमा उनको लगानी नै थिएन । थोरै दाउरा संकलन गरेर बेच्न थालेका हुन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहानेसँग राम्रो सोच छ, योजना छ भने पूँजी ठूलो कुरा होइन । सानोपूँजीबाट पनि पर्यटन सेवाको क्षेत्रमा उद्यमी बन्न सकिन्छ । कामको प्रकृति हेरेर पूँजीको आवश्यकता पर्छ । एक लाख पूँजी लगानी गरेर पनि पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुरु गर्न सकिन्छ । काम गर्दै जाने, सिक्दै जाने, सुधार गर्दै जाने, क्षमता बिस्तार गर्दै जाने विधि सबैभन्दा राम्रो हो । शुरु मै राम्रो होटल बनाउँछु भन्यो भने कम्तिमा १ अर्ब पूँजी चाहिन्छ । भर्खरै ठमेलमा सञ्चालन हुन लागेको छायाँ सेन्टरमा ५ अर्ब लगानी भएको समाचार पढ्याैं। त्यो भन्दा राम्रो होटल खोल्न अथाहा पूँजीको आवश्यकता पर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहाने उद्यमीहरुले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने पूँजी भन्दा ठूलो मानव संशाधन हो । राम्रो सोच र योजना छ, बैंकलाई धितो दिने सम्पत्ति पनि छ, मानव संशाधन राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने क्षमता छ भने पैसा बैंकले दिन्छ ।
सानो पूँजी लगानी गरेर अरुले भन्दा फरक काम थाल्ने उद्यमीहरु नै सफल हुन्छन् । आज विश्वका धनाढ्यहरुको सूचि केलाएर हेर्ने हो भने अधिकांश धनाढ्यहरु पहिलो पुस्तामा नै धनाढ्य भएका छन् । ठूला लगानीले नभई नविन सेवा तथा बस्तु उत्पादनले उनीहरुलाई धनी बनाएको छ ।
अर्गानिक ग्रोथ राम्रो हुन्छ । आफ्नो क्षमताले भ्याउने मात्र काम गर्नुपर्छ । सोचेजस्तो राम्रो कसैले गर्न सक्दैनन् । अरु विलिनियर भए भन्दैमा त्यसको कपी गर्नेहरु सफल हुँदैनन् । उद्यमी बन्ने कुरा कपी गरेर हुँदैन, भित्रबाट पलाएर आउनुपर्छ । जुनसुकै व्यवसाय गर्दा पनि त्यसको अध्यारो पक्ष हुन्छ । अध्यारो पक्ष देख्न सक्ने, अध्यारो पक्षलाई चिर्न सक्ने र अप्ठ्यारो अवस्थामा नआत्तिने व्यक्ति व्यवसायमा सफल हुन्छ ।
खुशी र तनाव
औसतमा हाम्रो जीवन २९००० दिनको हुन्छ । हामी हाम्रा आफन्त गुम्दा करिव २०० दिन मात्र दुःखी हुन्छौं । बाँकी दिन खुशी नै हुने हो । तर, खुशी हुन जान्नुपर्छ । उद्यमी कै कुरा गर्दा पहिलो पटक कम्पनी दर्ता गरेपछि खुशी भईन्छ । कार्यालय खोल्ने क्रममा एउटा फोन जोड्दा पनि खुशी हुइन्छ । अफिसमा फर्निचर सेट गर्दा एउटा खुशी मिल्छ । कर्मचारीहरु राखिसकेपछि अर्को खुशी थपिन्छ । व्यवसाय राम्रो हुँदै गर्दा खुशी थपिदै जान्छ । अरुको भन्दा राम्रो गर्न सकियो, पहिलो स्थानमा नै आउन सकियो भने झनै खुशी हुइन्छ ।
उद्यमी सधैं खुशी मात्र रहन सक्दैन, तनावपनि हुन्छ । तर, तनावलाई पनि खुशीको रुपमा लिन सक्नुपर्छ । किनकी तनाव नै आवश्यकता आविश्कारको जननी हो । जब मान्छेमा तनाव हुन्छ, तब उसलाई अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ । आवश्यकता भएपछि त्यो पूर्ति गर्न नयाँ सोच आउँछ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्छ । घर भाडा तिर्नु पर्छ । कार्यालयको आवश्यक सरसामान किन्नुपर्छ । कम्पनीको लागि बस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिनु पर्छ । बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । सरकारी नीति नियमको परिपालना गर्नुपर्छ । यी सबै पक्षको व्यवस्थापन गर्न धेरै चुनौतिहरु हुन्छन् । एउटा उद्यमीले यी सबै चुनौतिहरुमा रमाउनु सक्नुपर्छ ।
मानिस पहिला हातमुख जोड्ने प्रयासका लागि काम गर्छ । त्यसपछि केही बचत गरेर घरबार जोड्न प्रयास गर्छ । त्यसपछि केही कमाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसपछि बचाउने दिशामा जानु पर्छ । त्यसपछि मानिस आस्थिक बन्छ । धर्म, चिन्तन मनन्मा जाने हो ।